Ingabe unayo umfana unesithakazelo kodwa ungaqiniseki ngemizwa yakhe? Ever wazithola esamangele ukuthi kusho lapho enza izinto ezithile noma enza ngendlela ethile? Ever wazibuza iyiphi yalezi zimpawu kudingeka uzibheke ukuze ukwazi uma idlala ngothando ngempela nawe?
Uma uphendule ngoyebo kule mibuzo zonke lezi, ke cishe udinga amathiphu ambalwa ukukusiza ngomkhumbi ngokusebenzisa futhi sithole uma kuba kuwe ngempela.
Ingabe iso contact?
Uma umfana usuke ukhuluma igcina iso contact for an isikhathi eside, ke ukuthi kungaba uphawu ukuthi abakuthandi kanye. Nokho, guys onamahloni angase futhi ubambe iso contact, siqala isikhathi esifushane.
Ingabe lokho othi awube?
Musa alichitha guy shy njengoba okungahambeki. Uma blushes nini wena ezungeze, ke kukhona ikhipha isiqondiso yakho ukuqala off ingxoxo bese usize guy out njengoba wenza befa ukukhuluma nawe. Ngisho guys abangavumelani shy, Blushing nakanjani uphawu kuhle ukuthi ukusikisela ezicashile unesithakazelo kuwe.
Ingabe izinzwa zakhe ukuthatha phezu?
Ever wazibuza ukuthi kungani umfana kubonakala ukubuyisa njalo uma okuzungezile? Well, kungase kungabi njalo ngoba efuna ukushiya. Labo nje izinzwa zakhe ukuthatha phezu njengoba ezama ngamafuphi isibindi ukukhuluma nawe.
Ingabe namashiya wakhulela?
Nakuba umfana ukuthi unesithakazelo ungase uzame afihle amehlo akhe lapho ikhuluma nawe, uma ubuza namashiya ngamehlo wahlahla, ke ukuthi kuwuphawu lokuthi ukuvusela umuntu imizwa yothando nawe.
Ingabe yena engumsindisi CopyCat?
Lokhu kuyiqiniso kakhulu. Uma ngothando nawe, uyokwenza ngokungazi ukukopisha kwenikwenzayo. Uke waphawula ukuthi noma nini uhambisa isandla sakho ngokusebenzisa izinwele zakho, isandla sakhe futhi lusishukumisela ukuba izinwele zakhe? Noma ngisho nalapho kususa emlenzeni yakho, akwenzayo too? Kufana magic of ndo futhi lezi ezinye zezimpawu kudingeka babheke out for.
Ingabe sitsheke ikhanda lakhe?
Wake waphawula ukuthi guy tilting ikhanda lakhe kuwe njengoba ukhuluma naye? Kusho yena ngempela uyakuthanda wena futhi Ukulalelisisa, ukuze ungalahlekelwa okuthile wena bethi.
Ingabe ikhona smile idlala ezindebeni zakhe?
A guy ukuthi unesithakazelo kuwe ukumoyizelela kuwe njengesibonakaliso sokuthi ufuna ukukhuluma nawe. Ngakho, njengophawu umeme ukuqala ingxoxo.
Ingabe ame akimbo?
A guy okhangwa ozozama akubonise ukuthi kukhona azethembe ngokuma ngezandla ezibekwe phezu hips, noma ngisho izithupha ibekwa izihibe ibhande lakhe. Lesi sibonakaliso kungenzeka ukuthi ezisobala, kodwa ingaba njengesihluthulelo guide.
Ingabe abafundi bakhe lakhulisiwe?
Bewazi yini ukuthi uma uthanda umuntu, abafundi bakho sandise futhi uma ungaphenduki, Bathi inkontileka? Unalokhu engqondweni, konke okudingeka ukwenze sibheke amehlo akhe njengoba wena ingxoxo. Uma benza bandise, ke ukuthi unesithakazelo.
Ingabe yena ngithinte wena?
Ingabe guy ezake zanikezwa wena touch soft, njengoba edlula? Wabe nakanjani unesithakazelo kuwe futhi ufuna zokubamba isithakazelo sakho. Nokho, watch out for labo aqala abangamalungu, kahle, nje aqala abafuna ukudlala bezungeza in a ubuhlobo. Uyazo ukuthi ngisho ukuthini, awu?
Njengoba wena manje uqonde izimpawu okufanele uzibheke kweso bazi uma idlala ngothando nawe, sekuyisikhathi ukuthatha inkunzi izimpondo. Ungavumeli ithuba ngidlule!